🥇 ▷ 16-bit Shovel Knight ah oo ugaarsi ah ayaa soo socda ✅
16-bit Shovel Knight ah oo ugaarsi ah ayaa soo socda
Sidii qorshuhu ahaa, maanta ayaa lasoo bandhigay bandhig cusub oo Ciyaaraha Naadiga Yacht kaas oo ay ku shaaciyeen dhowr war oo ku saabsan mustaqbalka Muuqaal jilicsan. Waxaa ka mid ah muujinta Shovel Knight Dig, khibrad cusub oo loo yaqaan ‘govel knvel’, oo u soo istaagi doonta muuqaalkeeda 16-bit ah.
Shovel Knight Dig Waa mashruuc hoos imanaya Nitrome iyo Ciyaaraha Naadiga Yacht, oo muddo sanad ah ku jiray horumar. Ciyaartooyda dhexdeeda waxaa lagu celin doonaa hubkii Shovel Knight, laakiin markan waxay sameyn doonaan si ay u soo ceshadaan boobkii uu xaday Drill Knight. Si taas loo sameeyo, wuxuu qaadan doonaa majarafaddiisa oo qoday moolka adduunka isagoo wata farsamoyaqaano ciyaarta oo na xusuusinaya mashaariicda sida SteamWorld Dig Y Qoday. Faahfaahinta xiisaha lihi waxay tahay inay lahaan doonaan xubno ka soo baxay qaab habsami leh si madadaalo u noqoto mid aan xad lahayn.
Waxaa mudan in la xuso taas Shovel Knight Dig Waxay soo bandhigi doontaa jilaayaal cusub, mindiyo iyo cadow. Intaa waxaa u dheer, waxay yeelan doontaa dhawaaq cod-sameeye ah oo uu sameeyay Jake Kaufman, muusig muusig oo daryeela ciyaarta ugu horreysa. Marka, way iska cadahay inay lahaan doonto shey cusub, iyo waliba kuwa kale oo ka dhigaya taageerayaasha qeybtooda ugu horreysa inay dareentaan guriga.
Waxaad ka arki kartaa wax dheeraad ah oo ku saabsan Shovel Knight Dig Muujintiisa hore:
Waa in la xuso in tani aysan ahayn war kaliya ee Yacht Club Games la wadaagay. Waxaan ula jeednaa waxay ku dhawaaqeen taas Boqorka kaararka, ballaarinta loogu talagalay Muuqaal jilicsan xiddigga King Knight, durba waa dhamaaday waxaana ku jiri doona kaarka minigame. Intaa waxaa u dheer, waa la muujiyey taas Shovel Knight Treasure Trove Waxay sidoo kale ku imaan doontaa Xbox One qaab qaab ahaan.
Ugu dambeyntiina, Ciyaaraha Naadiga Yacht ayaa shaaca ka qaaday in Bandhig Faneed Kabayare Waxay noqon doontaa ciyaar leh qaabab casriyeeysan iyo noocyo badan. Waxa kale oo uu shaaca ka qaaday in Mona uu ka mid noqon doono jilayaasha la dheeli karo qaybtan dagaalada.
Hadda oo aad ogtahay dhammaan wararka la xiriira Muuqaal jilicsan kuwaas oo jidka ku jira, noo sheeg, maxaad u maleysay? Waa kuwee midkoodkee ugu xiisaha badan?
Raadinta warar dheeri ah oo laxiriira Muuqaal jilicsan? Waxaad ka heli doontaa halkan.